Maxaad ka taqaan ‘Jeel Ogaadeen’? Warbixin | Berberanews.com
Home WARARKA Maxaad ka taqaan ‘Jeel Ogaadeen’? Warbixin
Maxaad ka taqaan ‘Jeel Ogaadeen’? Warbixin
Qofka kaliya ee naga ogolaaday in aan magaciisa sheegno waa Suldaan Fowsi Suldaan Maxamed Cali oo xabsiga ku xirnaa muddo dheer. Wuxuu noo sheegay in shantii sano ee ugu dambeysay muddadii uu xirnaa, lagu hayey kaligii qol ciriiri ah oo uu ku qiyaasay laba mitir. Wuxuu kaloo sheegay in muddo bil ah maalin kasta bakoorado ay ku garaaci jireen “laba nin ilaa ay ka daalaan”
Previous articleSomaliland oo shaqada ka joojisay Lix Hay’adood
Next articleDawlada Imaaraadka Carabta oo balan qaaday inay laba jibaarayso horumarinta maalgalinta dekeda Berbera